जव दुई छोरीले बाबुको लास बोकेर घाट पुर्याए : RajdhaniDaily.com
Home भर्खरै जव दुई छोरीले बाबुको लास बोकेर घाट पुर्याए
कोरोना आशंकामा छिमेकीले लास छुन्नौ भनेपछि दुई छोरीले गरे अन्त्येष्टि
उदयपुर । दीर्घरोगका कारण लामो समय थलिएको बालबहादुर थापा मगरको मत्यु भएपछि छिमेकीले कोरोनाको आशंकामा उनको शव छुन नमानेपछि दुई छोरीले आफैले शबयात्रा गरि दाह संस्कार गरेका छन् । उनको छोरी भगवती र कुमारीले शबयात्रा पछि दागबत्ती दिएर अन्तिम संस्कार गरेका हुन् ।
आफन्त र दाजुभाइ नहुँदा उदयपुरको कटारी नगरपालिका–५ बरमझियाका दुई जना दिदी बहिनीले सोमबार बुबाको मृत्युपछि आफैंले शबयात्रा गरी दाहसंस्कार गरेका हुन् । स्थानीय ६० वर्षीय बालबहादुर मगरको मृत्युपछि छिमेकीले शव छुन नमानेपछि १७ र २० वर्षीया छोरीले नै दाहसंस्कार गरेका हुन् ।
बालबहादुर बसोबास गर्दै आएको बरमझियामा आफनो समुदायका आफन्त र दाजु भाइ छैनन् । स्थानीयले शव नछुने तर, अन्य सहयोग गर्ने भनेपछि दुई छोरीले संस्कार अनुसार शवयात्रा गरी तवाखोलाको घाटमा दाहसंस्कार गरेका हुन् ।
दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा गर्दै आएका बालबहादुरको परिवार २०६१ सालतिर ओखलढुंगाबाट त्यहाँ आएर बसेका थिए । दुई छोरी र श्रीमती सहित स्थानीय शिवहरि दाहालको जग्गामा सानो झुप्रो हालेर बसोबास गर्दै आएका थिए । परिवारका ४ जना नै कटारी बजार र आसपासको क्षेत्रमा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा गर्दै आएका छन् ।
लामो समय देखि पेटको समस्याले बिरामी परेका बालबहादुर बैशाखदेखि घरमै थलिएका थिए । स्थानीयको सहयोगमा औषधोपचार गराए पनि निको नभएपछि घरमै थिए । बिरामी भएर घरमै थलिएर मृत्यु भएका बालबहादुरको मृत्युपछि कोरोना संक्रमणको कारण देखाउँदै स्थानीयले शब छुन नचाहेको स्थानीयबासीले बताए ।
‘बुबाको हामी आफैंले शबयात्रा गरेर दाहसंस्कार ग¥यौं’ छोरी भगवतीले भनिन् ‘अब मगर संस्कार संस्कृति अनुसार काजकिरिया पनि गर्छौं ।’ मगर संस्कार अनुसार ७ दिनमा बालबहादुरको काजकिरिया सकिने छ । अहिले दुई छोरी कुमारी, भगवती र उनीहरूकी आमा किरियामा बसेका छन् ।
मृतक थापाको १ छोरा २ छोरी छन् । छोरा गरिबीका कारण कमाउन भारतको कोइला खानीमा गएका छोरा अझैसम्म फर्किएका छैनन् ।
जव छाेरीले बुबाकाे लास बाेके
लन्डन । युरोकप फुटबलअन्तर्गत गएराति सम्पन्न खेलमा स्लोभाकियासँग पोल्यान्ड पराजित भएको छ भने स्पेन र स्वीडेनले गोलरहित बराबरी खेले । समूह इ को खेलमा...
काठमाडौं । राजस्व छली गर्नेहरूमाथि सरकारले आक्रामक कारबाही थालेपछि उनीहरूको सातो जान थालेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले...
सुरक्षाका सात सूत्र
सुरक्षा हाम्रो आधारभूत आवश्यकता हो । सुरक्षित वातावरणभित्रै सबैले आ–आफ्नै नियमित क्रियाकलाप र गतिविधि सञ्चालन गर्ने भएकाले सबैका निम्ति सुरक्षा उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।...
Breaking News ईश्वर तामाङ - July 15, 2020 0
सिन्धुपाल्चोकमा जारी ब्याडमिन्टन प्रतियोगीता प्रिन्स दाहाल र नविन श्रेष्ठ फाइनलमा
खेल ईश्वर तामाङ - December 10, 2020 0
सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोक चौतारामा जारी सर्वाधिक धनराशिको ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता अन्र्तगत राष्ट्रिय पुरुष एकलतर्फ को फाइनल खेलमा प्रिन्स दाहाल र नविन श्रेष्ठ भिड्ने भएका छन्...
अर्थ ईश्वर तामाङ - December 3, 2020 0
प्रदेश ईश्वर तामाङ - February 18, 2021 0
सन्दकपुरमा ड्रोन उडाउने १० नेपाली एसएसबीको नियन्त्रणमा
प्रदेश ईश्वर तामाङ - February 20, 2020 0
इलाम । इलामको पर्यटकीय गन्तव्य सन्दकपुर क्षेत्रमा ड्रोन उडाउने १० नेपाली युवालाई बुधबार भारतीय सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले पक्राउ गरेको छ । सन्दकपुर...
Breaking News ईश्वर तामाङ - December 21, 2020 0
च्याम्पियन्स र युरोपा अनिश्चित
Not-to-be-missed ईश्वर तामाङ - March 25, 2020 0
न्योन । युरोपेली फुटबल महासंघ (यूईएफए)ले विश्वव्यापी बनेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण युईएफए च्याम्पियन्स लिग र युरोपा लिगको फाइनल अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ...
कोरोनाको त्रासदी : विद्यमान मानवीय मूल्यको विखण्डन
बिचार ईश्वर तामाङ - April 11, 2020 0
दोस्रो विश्वयुद्धपछि मानवीय जीवनमा आएको सबैभन्दा ठूलो विपद् कोभिड–१९, अर्थात् कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी प्रकोप नै हो । दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् पनि विश्वमा विभिन्न विपद्जन्य घटनाले...
प्रदेश ३ ईश्वर तामाङ - September 22, 2020 0
Not-to-be-missed ईश्वर तामाङ - July 1, 2020 0